"Shiishad jeceylka carabta iyo sida uu u maalgelinayo argagixisada Soomaaliya" - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Carsten Koall
Warbixin lagu qoray jariiradda Forbes ayaa looga hadlay in dhaqaalaha laga helo dhoofinta dhuxusha Soomaaliya in loo adeegsado cabidda shiishadda taas oo la sheegay in lagu maalgeliyo ururada argagixisada.
Maqaalka ayaa lagu xusay in maqaayado badan oo ku yaalla dalalka khaliijka oo ka ganacsada shiishada aysan ka warheyn inay taageerayaan ololaha maalgelinta rabshadaha ka taagan mid kamid dalalka ugu saboolsan dunida.
Sida laga soo xigtay, kooxda Qaramada Midoobey ee la socodka xaaladaha Itoobiya iyo Eritrea, dhuxusha waxay noqotay isha dhaqaalaha ugu weyn ee ururka Al Shabaab kuwaas oo ugu yaraan 7.5 milyan oo doolar oo canshuur ah ka qaaday baro kontrool oo ay dhigtaan deegaanno ka tirsan Jubooyinka oo ah meesha inta badan laga soo saaro dhuxusha.
Dhuxusha laga soo saaro Soomaaliya waa mid tayo leh oo si weyn looga jecel yahay dalalka Khaliijka carabta, waana ganacsi xaalufin ku hayo deegaanka.
Sida ku xusan warbixin ay soo saartay ha'yadda FAO, Waxaa lagu qiyaasay dhuxusha laga soo saaray Soomaaliya sannadkii 2017-kii oo kaliya ah inay gaarayso 3.6 milyan oo jawaan, waxay Al Shabaab halkii jawaanba ka qaateen canshuur gaareyso 2.5 doolar, waxaana laga dhoofiyay dekedaha magaalooyinka Buur-Gaabo iyo Kismaayo.
Intii u dhexeeysay bishii Nofembar sannadkii 2017-kii iyo bishii February sannadkii 2018-kii inta badan dhuxusha Soomaaliya waxaa laga dejiyay dekedaha Duqm iyo Shinaas oo ku yaalla dalka Cumaan.
Laga bilaabo bishii Marso ee sannadkan, Cumaan waxay sameysay howlgal ka dhan ah dhoofinta dhuxusha, waxay gacanta kusoo dhigtay 37,000 jawaan oo dhuxul ah.
Ma hirgelaysaa mamnuucidda dhuxusha ee maamul goboleedka Jubbaland?
Tallaabadan ayaa ku qasabtay dhammaan maraakiibta dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya ee geyn jiray dekedo ku yaallo dalka Cumaan inay u weeciyaan goobo kale.
Waxaana kamid ah dekedo ku yaalla dalka Iiraan sida Kish iyo Qeshm. Qolyaha ku howlan dhoofinta dhuxusha waxay sameysteen shahaadooyin been abuur ah oo ay ku sheegayaan in dhuxusha laga keenay dalal Afrikaan ah oo ay kamid yihiin Ghana iyo Comoros, waxaana jawanaada dhuxusha lagu qoraa in laga soo saaray Iiraan, kaddibna waxaa loo daabuulaa dekedda Hamriyah oo ku taalla Dubai.
Kooxda Qaramada Midoobey ee la socota xaaladaha dalka Soomaaliya, warbixin ay sannadkii hore soo saareen ayaa lagu sheegay in warqad ay u qoreen mas'uuliyiinta dalka Iiraan sii looga wadahadlo xakameynta dhoofinta duxusha Soomaaliya balse Iiran waxay u muuqatay mid aanan diyaar u aheyn wadashaqeynta.
Image caption Dhuxusha ka timaada Soomaaliya waxaa la sheegay in si sharci darro ah waddamo kale loogu sii dhoofiyo
Waxay sheegeen in dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya ay dhawaan hoos u dhacday, Markii hore, waxaa dalka laga dhoofiyay 4 milyan jawaan oo dhuxul ah, balse hadda ay gaarayaan 3 milyan oo jawaan ah.
Marka laga reebo howlgalka ka dhanka ah dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ee dowladda Cumaan ay wado, bishii May sannadkii 2017-kii, ciidammada ilaalada xeebaha Kuwait waxay qabteen dhuxul, waana tallaabadii ugu horreysay ee ka dhanka ah dhuxusha ee uu qaado dal ka tirsan Khaliijka.
Bishii Maarso ee sannadkii 2018-kii, Imaaratka Carabta waxaa lagu qabtay Markab la sheegay inuu siday dhuxul laga keenay Gambia.
Dhoofinta dhuxusha ma ahaan oo kaliya isha dhaqaale ee ururka Al Shabaab balse waxay canshuur ka qaadaan ganacsatada gudaha dalka.
Maqal Deeggaanka Gaarisa oo laga mamnuucay dhirta la jaro ee dhuxusha laga sameeyo